လိင်ပြန်ခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
လိင်ပြန်ခြင်း ဆိုသည်မှာ သာမဏေအား လူ၏ အသွင်အပြင်သို့ ပြန်လည် ပြောင်းလဲပေးခြင်း ဖြစ်၏။ သာမဏေသည် ဆယ်ပါးသီလကို စောင့်ထိန်းရ၏။ ထိုသို့ စောင့်ထိန်းနေသည့် သာမဏေသည် ပါဏာတိပါမှ သုရမေယ အထိ ရှေ့ငါးပါးသီလတွင် တစ်ပါးပါးကို ကျူးလွန်မိပါက သရဏဂုံ ပျက်စီးသွား၏။ ထို့အပြင် သာမဏေ မဟုတ်တော့ဘဲ လူဖြစ်သွား၏။ သင်္ကန်းဝတ်ထားသဖြင့် အသွင်အပြင်သာ ရှိတော့ပြီး လူဖြစ်နေ၏။ ထို့ကြောင့် သင်္ကန်းဝတ်ထားသည့် လူ ဖြစ်နေ၏။
ထို့ကြောင့် သင်္ကန်းဝတ်လူမှာ သရဏဂုံနှင့် သီလ ပျက်စီးသွားပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် သင်္ကန်းနှင့် မထိုက်တန်တော့ပေ။ ထို့ကြောင့် လူဝတ်လဲကာ လူ့အသွင်အပြင်ကို ပြန်လည် ပြောင်းပေးရ၏။ ဤသည်ကိုပင် လိင်ပြန် သည်ဟု ဆိုကြသည်။ လိင်္ဂ၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ အသွင်အပြင် ဖြစ်၏။
တစ်ကြိမ်တစ်ခါ မတော်တဆ ကျူးလွန်မိ၍ နောင်အခါ ကျူးလွန်ခြင်းမရှိအောင် စောင့်ထိန်းလိုသော သူကိုမူ လူဝတ်မလဲစေ၊ လိင်မပြန်စေဘဲ သရဏဂုံ ထပ်မံပေးရ၏။ သရဏဂုံပေးရုံဖြင့် သီလပေးမှုကိစ္စပါ အလိုအလျောက် ပြီးစီး၏။ သီးခြားပေးရန် မလိုပေ။ သို့သော် စောင့်စည်းလိုစိတ် ပိုမိုထက်သန်ရန်အတွက် သီလပေးခြင်းက ပို၍ ကောင်း၏။ ဥပဇ္ဈာယ်ကိုမူ ထပ်မံ၍ ပေးရမည်။
အောက်ပါအချက်တို့တွင် တစ်ချက်ချက်ကို ကျူးလွန်သော သာမဏေအား လူဝတ်လဲပေးရ (လိင်ပြန်ပေးရ) ၏။
သတ္တဝါ၏ အသက်ကို သတ်ခြင်း။
သူတစ်ပါး၏ ပစ္စည်းကို မတရားယူခြင်း။
မမြတ်သော မေထုန်မှုကို ကျင့်ခြင်း။
မမှန်သော စကားကို ပြောခြင်း။
အရက်သေစာ သောက်စားခြင်း။ (ဤငါးချက်သည် ဆယ်ပါးသီလတွင် ပါဝင်ပြီး ဖြစ်၏။)
မြတ်စွာဘုရားကို အပြစ်ပြောခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်း။
တရားတော်ကို အပြစ်ပြောခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်း။
သံဃာတော်ကို အပြစ်ပြောခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်း။
ယင်းဆယ်ချက်အနက် စတုတ္ထအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ သတိပြုသင့်သည်မှာ ရယ်စရာအဖြစ်ဖြင့်ပင် လိမ်ညာပြောဆိုခြင်းသည် သီလပျက်၍ လိင်ကျပေသည်။ ပဉ္စမအချက်တွင် အရက်သေစာမှန်း သိလျက်သောက်မှသာ လိင်ကျ၏။ မသိဘဲ သောက်လျှင်မူ လိင်မကျပေ။ သို့သော် ရဟန်းတော်ဖြစ်ပါက မသိဘဲ သောက်မိလျှင်လည်း လိင်ကျ၏။
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးတွင် တစ်ပါးပါး၏ ဂုဏ်တော်ကို ထိပါးပုတ်ခတ်၍ အပြစ်ပြောဆိုသည့် သာမဏေကို ဆရာ ဥပဇ္ဈာယ်တို့က ရတနာသုံးကို အပြစ်ပြောပါက ရနိုင်သည့် ဆိုးကျိုးကို ပြောပြ၍ တားမြစ်ရမည်။ ထိုသို့ တားမြစ်၍ သာမဏေက ရှောင်ကြဉ်ပါမည်ဆိုလျှင် သဲဒဏ်၊ ရေဒဏ် ပေးပြီးနောက် သံဃာ့အလယ်တွင် အပြစ်ကို ဖော်ထုတ်လျှောက်ထားစေကာ ကန်တော့စေပြီးမှ သရဏဂုံ ပေးရမည်။ သီလပေး၍ ဥပစ္ဈာယ် ယူရ၏။ ထိုသို့ တားမြစ်ပါသော်လည်း မရှောင်ကြဉ်သည့် သာမဏေကို လိင်ပြန်ပေးရမည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ချမ်းမြေ့ဆရာတော် (၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ). လူငယ်သင်ချမ်းမြေ့အခြေပျိုးဗုဒ္ဓဘာသာ. ၅၅ (က)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။: ဦးအောင်သိန်း၊ ဓမ္မဒေသနာပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့ငယ်၊ ချမ်းမြေ့ရိပ်သာကျောင်း။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လိင်ပြန်ခြင်း&oldid=425394" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၀၃:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။